Fifanarahan’i Ramsar : faritra mando dimy vaovao ho an’i Madagasikara | NewsMada
Fifanarahan’i Ramsar : faritra mando dimy vaovao ho an’i Madagasikara
Nandritra ny fankalazana ny Andro iraisam-pirenena ho an’ny faritra mando, ny 2 febroary teo, nankatoavin’ny Fifanarahan’i Ramsar ny fanasokajiana toerana dimy vaovao ho faritra mando eto Madagasikara. Voakasik’izany ny any Ankarafantsika, ny Nosy Ve Androka, ny any Bemanevika, ny any Sahamalaza ary ny any Antrema.
Anisan’ny singa nahavoafidy azy ireo ny fananana harena voajanahary sy mampiavaka azy avy. Maro koa ny zavamananaina tandindomin-doza ao amin’izy ireo. Ho an’i Bemanevika, faritra Sofia, ohatra, tsy hita raha tsy any amin’ity toerana ity ny karazana gana dia (angaka) antsoina hoe “fuligule de Madagasikara” (Aythya innotata). Noheverina fa efa lany tamingana izy ireo saingy mbola nahitana tany an-toerana.
Ho an’ny Nosy Ve Androka, any amin’ny fari-dranomasina Mahafaly, faritra Atsimo-Andrefana, maherin’ny 140 ny karazana akorandriaka (corail), maherin’ny 240 ny karazan-trondro sy zavamananaina ambany ranomasina. Hita any koa ny karazan-trondro miendrika vato (fossile), “Latimeria chalumae”, miampy karazana fano (soka-dranomasina) miisa dimy.
Nilaza ny tompon’andraikitry ny tontolo mananaina an-tanety ao amin’ny WWF, Rafanomezantsoa Simon, fa “manome lanja iraisam-pirenena an’i Madagasikara amin’ny lafiny tontolo iainana, sady hanampy amin’ny fikajiana sy fiarovana azy ireny ny fanasokajiana ireo faritra mando dimy vaovao ireo”.